Taliye kuxigeenka Asluubta oo beeniyay nin ajnabi ah oo lasheegay in xabsiga dhexe lagu qalay +VIDEO | Wardoon
Home Somali News Taliye kuxigeenka Asluubta oo beeniyay nin ajnabi ah oo lasheegay in xabsiga...
Taliye kuxigeenka Asluubta oo beeniyay nin ajnabi ah oo lasheegay in xabsiga dhexe lagu qalay +VIDEO
Taliye kuxigeenka Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Jen. C/kariin Cali Afrax ayaa ka hadlay wararka sheegaya in maxaabiis Daacish ah ay habeen hore ku dhaawaceen xabsiga Dhexe nin Ajnabi oo maxbuus ah, kaasoo dhowaan laga soo xiray Garoonka Muqdisho, kaddib markii lagu qabtay walxo laga shakiyay oo uu diyaarad la raaci rabay.
Taliye kuxigeenka ayaa sheegay in labo ruux oo isugu jiray Shabaab iyo Daacish ay isku dayeen inay dhib gaarsiiyaan, balse arrintaas uu ka war helay Taliyaha Xabsiga, kaasoo fashiliyay qorshahaas.
Waxaa uu sheegay in Saraakiil ajnabi ah oo ka socday Shirkadda Bancraft iyo kuwa kale ay soo booqdeen ninka ajnabiga ee u dhashay dalka Ingiriiska, isla markaana ay qireen in aysan wax dhib ah gaarin.
Taliye kuxigeenka ayaa sheegay in Xabsiga ay ku xiran yihiin dambiilayaal kala duwan oo isugu jiray Daacish iyo Shabaab.
Ninkan u dhashay Ingiriiska oo lagu magacaabo Anthony Thomas ayaa todobaadkii hore ay Maxkamadda Gobolka Banaadir amartay in lagu sii haayo, kaddib markii lagu soo eedeeyay dambi ah inuu qalqal geliyay amniga dalka.
Previous articleGo’aano ka soo baxay Kulamadii u socday Farmaajo & Madaxda dowlad goboleedyada +SAWIRRO
Next articleDAAWO:-Dood kulul oo ka dhalatay hadal uu Soomaaliya ka sheegay Madaxweynaha Uganda
DAAWO Odayaasha Beesha Cayr oo yiri waan diidnay dulmiga Dhuusamareeb laga...
BOORAMA OO DAGAAL KADHACAY